Izimvo zoqobo ngeelebheli zethu zeKrisimesi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izimvo zoqobo zokuphawula iizipho zeKrisimesi
Yimihla apho iinkcukacha zibaluleke kakhulu, kwaye sonke sonwabile ngokufumana kunye nokunika izipho abo sibathandayo. Nazi umfanekiso oqhelekileyo weKrisimesi, kwaye ke xa ungena kwigumbi lokutyela uyifumana zizele zizipho. Abantwana bajonge kulo mzuzu unyaka wonke. Kuba hlula onesiphiwo ngasinye, okanye nje yazise Ngendlela entle kakhulu sicebisa ukuba uqhubeke ufunda.
Kubalulekile ukuba uthathe ingqalelo kuzo zonke izinto. Siphakamisa ezinye iingcamango zokudala ukwenza ngokwezifiso iifayile zakho iilebula. Kukho zonke iintlobo, kwaye siyakuqinisekisa ukuba iya kukunika ukuchukumisa okukhethekileyo.
1 Iilebhile ezenzelwe wena ezinamanqaku ancangathi
2 Iilebhile ezinemifanekiso
3 Iileyibhile zekhadibhodi ezinamaso
4 Iileyibhile zekhadibhodi ezinemfumba yelaphu
5 Iibhola ezingabonakaliyo
6 Amagama abhalwe ngobuchule bokubhala
7 Khuphela iilebhile zekrisimesi
8 Izitampu ezineeleta
9 Iipini zeempahla ezenziwe ngomthi
Iilebhile ezenzelwe wena ezinamanqaku ancangathi
Phambi kokuba uqale wenze iilebheli, Kuya kufuneka ucinge ukuba kubhekiswa kubani na kwaye ulungelelanise uyilo lwakho kwimeko nganye. Umzekelo, ukuba kuya kufuneka ugcwalise igumbi lokutyela ngezipho zabantwana abahlukeneyo, unako Sebenzisa imibala ukuchonga isipho ngasinye. Siza kufumana kwakhona i- isiphumo sokubonakalayo mhle kakhulu. Khawufane ucinge igumbi lokutyela ligcwele izipho ezimibalabala: luhlaza okwesibhakabhaka, pinki, luhlaza, bomvu, orenji. Umbala ngamnye unokuba ngowomntu owahlukileyo. Ukufezekisa oku sinokuncamathisela amanqaku ancangathi anemibala. Zingabizi kwaye kulula ukuzincamathisela.
Unokuphinda usebenzise ithuba lokuba zenzelwe umntu ukuba azilungelelanise nabantu ngamnye obanika zona. Unokukhetha okuninzi, kwaye nathi senze ukhetho ukuze uphefumlelwe okanye uvelise ezinye zeembono esikubonisa zona.
Enye into elungileyo, esingasoloko siyithathela ingqalelo, kukuyila Iilebheli ezisebenzisa iifoto. Sihlala siwela kumxholo wokuba sibhale igama lomamkeli, kodwa njengoko besitsho "Umfanekiso uxabisa iwaka lamagama". Ukongeza, yithegi onokuyigcina njengesinye isipho. Ungasifaka ifoto kuso, okanye usongele umtya ujikeleze isipho kwaye usixhome ngesinxibo sempahla
Kungaba mnandi khangela iifoto ezindala, iyahlekisa okanye usikhumbuze nge umzuzu olungileyo ecaleni kwakhe.
Iileyibhile zekhadibhodi ezinamaso
Nangona ilebheli yekhadibhodi inokusebenza, singayinika ukubamba okupholileyo ukuba sisebenzisa eyahlukileyo ubuhlalu ukwenza ngokutsha abalinganiswa bekrisimesi.
Ukuba ujonga umfanekiso, zininzi iindlela onokukhetha kuzo kunye neendlela zokwenza oku. Umzekelo, a Umntu weqhwa inokufezekiswa ngokuncamathisela amaqhosha amathathu amhlophe. Ukuba sijonga imingxunya kwiqhosha ngokwalo, ezantsi, eyona inkulu, inemingxunya emine kwaye eminye mibini kuphela. Abo basembindini basikhumbuza Amaqhosha e-t-shirt, kunye nezo zingasentla amehlo. Ngomakishi sinika okokugqibela. Khumbula, kubalulekile ukuba kuqala zoba izinto kwaye kamva namathela amaqhosha. Enye indlela elula yokufumana Umntu weqhwa Ivela iibhola zomqhaphu.
Iileyibhile zekhadibhodi ezinemfumba yelaphu
Ukuqhubela phambili kwizinto ezinobunzima, sinokukhetha i- iphepha elinamaphepha. Siza kufumana ngaphezulu ukuqina y ukumelana. Inyathelo lokuqala kukusika ikhadibhodi kwimilo esiyifuna kakhulu. Ezona zisetyenzisiweyo zezi iimilo eziziingxande. Emva kokunqunyulwa, siya kusebenzisa amalaphu aneepateni zeKrisimesi ukubabamba ngokukhethekileyo. Singazifumana nakweyiphi na ivenkile yokuthunga.
ukuba namathela ilaphu kwikhadibhodiOlona khetho lulungileyo kukusebenzisa Iglue emhlophe o qhagamshela iglu. Sishiya ezinye izimvo ukuze zikukhuthaze.
Ezi bezikwi fashoni ixesha elide Iibhola zeKrisimesi Inani elipheleleyo kucace gca. Endaweni yokuzixhoma emthini okanye kwikhonkco lomnyango, sinokuyisebenzisa ithegi isipho sethu. Ngaba unako gcwalisa ngaphakathi nge amaphepha imibhalo kunye -nombre yomntu
Amagama abhalwe ngobuchule bokubhala
Inkqubo ye zokubhala Inokuya ngaphaya kwe-calligraphy, ngumxube phakathi kokubhala kunye nokuzoba, ukuhombisa okanye ukwenza imilo ngonobumba. Kungoko kunokuthiwa yi ubugcisa bokuzoba ngonobumba.
Se lungisa oonobumba kwaye zenziwe ngokufanelekileyo ukuze ibe ntle ngakumbi. Kungenziwa ngayo nayiphi na into ebhaliweyo. Umzekelo, ngeebrashi, amakishayo (ubukhulu obuhlukeneyo), iipeni, phakathi kwabanye. Sishiya ikhonkco kwifayile ye- ikhonkco umdla kakhulu osifundisa ukuba senze zokubhala ukusuka kwisiseko.
Khuphela iilebhile zekrisimesi
Ukungabinalo ixesha Akunyanzelekanga ukuba kuthetha ukuba kufuneka rhoxisa kwintetho elungileyo. Isisombululo esiza kuthi kuwe Khuphela iilebhile zekrisimesi ukuze uprinte kuphela. Uninzi lwazo lunendawo yokubhala igama. Sikubonisa ezinye amakhonkco apho khuphela Iilebheli eziya kunika umbala kwizipho zakho simahla.
Olunye ukhetho oluza kusivumela yonga ixesha elininzi ukusebenzisa izitampu zeleta. Singathenga ikhithi Kuko konke alfabeti kunye ne-inki kunye nesitampu soonobumba ukwenza igama elifunwayo.
Olu khetho lukwanjalo iyancomeka ukulungiselela abo Abanawo umbhalo obhalwe ngesandla kwaye abafuni ukuyeka ukwenza ilebheli yobugcisa. Sukuhendeka ukuba uprinte iphepha elinegama elibhalwe kulo.
Iipini zeempahla ezenziwe ngomthi
Olu luvo luyinto yoqobo kwaye inika umbono opholileyo kwisipho sethu. Umbono ngulo bhala kwibhanti yokhuni igama lomntu ekubhekiswa kuye isipho. Ukuhombisa uqinisa singasebenzisa uluhlu olubanzi lwezixhobo.
IPodemos umsebenzir nayiphi na into, gcinani engqondweni ukuba kunjalo plano kuya kuba lula ukubambelela ngokufanelekileyo. Sibhekisa kubalinganiswa beKrisimesi okanye amaqhina. Sishiya i iseti yemifanekiso ukuze uqonde ngokulula ngakumbi umxholo ekubhekiswa kuyo.
Ukuba ufuna ukuthatha ithuba peyinta iinzipho ezindala ukuba unayo ekhaya, yindlela elula yokwenza peyinta abakhongi ngemibala eyahlukeneyo. Inkqubo ye- Iziphumo zilungile kwaye awuyingcolisi indlu. Ukuba usebenzisa isitshizi kufuneka ulumke ungangcolisi nantoni na, kuba ipeyinti isasazeka kuyo yonke indawo, ukongeza kwivumba elinamandla elishiya.
Kananjalo, ukuba asinalo ixesha elininzi okanye ubuchule, sinako thenga iimpahla zokunxiba ezinemibala yeKrisimesi kwaye kuya kufuneka sibhale igama elimakishayo. Kule ikhonkco uya kufumana iivenkile ezikwi-intanethi apho thenga iimpahla zokunxiba zeKrisimesi ngamaxabiso afikelelekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Izimvo zoqobo zokuphawula iizipho zeKrisimesi
UJud Iturre sitsho
Mamen Sacido Seville
Phendula kuJud Iturre
Ukulungelelanisa iifoto ezininzi ukwenza iividiyo zexesha lokujonga ukuhamba kwexesha